पहेलियों, आधारित गुणहरू, विशेषताहरु। बच्चाहरु को लागि पहेली को वर्णन
पहेलियों संग प्रत्येक चिनो। लोक कला यो सानो फारम बच्चा को विकास को लागि एक असामान्य ठूलो अवसर दिन्छ। यो पूर्व-स्कूलमा अझै पनि छ र धेरै वर्ष को लागि मनपर्ने गतिविधिहरु को एक बन्ने बच्चालाई जीवनमा देखिन्छ।
एक रहस्य के हो
, विधाहरू को विस्तृत विविधता भएको मौखिक लोक कला स्वामित्वको बीचमा यस्तो नर्सरी राइम्स, Jokes, Jokes गीतहरू, उपदेश, वचनहरू, पहेलियों रूपमा सम्मान को स्थान ओगटेको छ। र केही संग उनको छैन भ्रमित गर्न सकिन्छ।
यस पहेली प्रश्न को प्रस्तुति अति संकुचित छ, तर यो पछिसम्म र कल्पनाशील छ। पहेली लेखकको कार्य, हराएको गुण जोगिन छ विशेषता विशिष्ट विषय वा घटना विशेषताहरु।
बच्चाहरु को विकास मा एक रहस्य के उद्देश्य छ
बच्चा केही लक्ष्य पछि लाग्दा जहाँ तपाईं पहेलियों अनुमान छ एक खेल, भेटी शिक्षक वा अभिभावक। निम्नानुसार हामी तिनीहरूलाई केही तैयार गर्न सक्नुहुन्छ:
प्रतीकात्मक बोली विकास। यो यस्तो epithets, अवतारहरूमा, यसको विपरीत, ताल र राइम रूपमा उपकरण द्वारा facilitated छ।
पहेलियों मा अस्पष्ट शब्दहरूको प्रयोग। यो बच्चाको शब्दावली अर्थपूर्ण बनाउन मद्दत गर्छ। एक पहेली को सुलझाने जब सानो मान्छे अस्पष्टता रूपमा भाषा को घटना ध्यान, शब्द को दोस्रो अर्थ सोच्न छ।
कल्पना विकास। यो पहेली सधैं एक कल्पना छ। बच्चा involuntarily आफ्नो विकास, यो पालना गर्नुपर्छ कल्पना। गुण र पहेली मा वर्णन वस्तुहरु को विशेषताहरु, वास्तविकता अनुरूप छैन। मात्र otgadka यसको ठाउँमा सबै राख्छ।
लिङ्कहरू बुझ्न। पहेली कि वस्तुहरु र घटना बीच संसारमा अवस्थित यस सम्बन्धमा मनन गर्ने मौका दिन्छ।
यहाँ प्रस्तुत सूची सामान्यतया वयस्क को पहेली मा उनको बच्चाहरु संग खेल्दै छ भन्ने मात्र मुख्य उद्देश्य चिनो लगाइएको छ। वास्तवमा, यो सूची धेरै व्यापक छ।
तिनीहरूलाई काम गर्न पहेली र छोराछोरीको तत्परता प्रकार
पहेलियों Guessing, बच्चा केही निर्णय , तार्किक कार्यहरू केही मानसिक अपरेसन कार्य गर्दछ। यो आधारमा, सबै पहेली कठिनाई को आफ्नो स्तर अनुसार समूह विभाजित छन्।
पहेलियों सफलता अनुमान को कठिनाई को कुनै पनि स्तर छोराछोरी तयार छन् कसरी निर्भर हुनेछ। तिनीहरूले कुराहरू, गतिविधिहरू, को पदहरू को रहस्यहरुलाई मा वर्णन गरिएको छ कि सम्बन्ध संसारमा निर्देशित हुनु आवश्यक छ। बच्चा यसलाई के सकून् भनेर, वयस्क प्रिपेरेटरी काम केन्द्रित बाहिर गर्नुपर्छ।
पहेलियों भाषामा विश्लेषण गर्न बच्चालाई क्षमता विकास हदसम्म आफ्नो Guessing मा दक्षता असर गर्नेछ। कुनै पनि रहस्य प्रस्तावित वयस्क बच्चाहरु फरक दृष्टिकोण बाट विचार गर्नुपर्छ: सफलतापूर्वक सही प्रतिक्रिया, शब्द गंध, रङ, कार्य वर्णन जो संकेत कि विषय वर्णन कि यो जस्तै काम कि।
आफ्नो बच्चा एक पहेली संग आउन जागिर प्रस्ताव गरिनेछ भएपछि, निम्न प्रश्नहरूको काममा समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई दिइएको:
के शब्द रहस्य सुरु?
कसरी पूरा गर्ने?
कुन तरिकामा प्रश्न formulated छ?
विषय वर्णन गर्न आफ्नो शब्दहरू छान्नुहोस्।
बिस्तारै, बच्चा यसलाई वर्णन सबै सुविधाहरू, वस्तुहरु को गुणहरू, प्रयोग आफ्नै otgadku पाउन सिक्न हुनेछ। र भाषा को रहस्यहरुलाई उहाँलाई मद्दत गर्न।
साथै, नतिजा वयस्कहरूको लागि प्रस्तुत जब को तरिका, बच्चा को बोली विकास, यसको उमेर, encyclopedic ज्ञान र अन्य कारक को सम्पत्तिको मात्रा को स्तर असर गर्न सक्छ।
पहिलो स्तर पहेलियों। वस्तुको संकेत
जटिलता को पहिलो स्तर को कार्यहरू जस्तै पहेली प्रस्तुत - केही घटना वा वस्तुको संकेत विवरण। तिनीहरूलाई को एक सरल सिर्जनागर्दै छ। भनिन्छ आकार, आकार, रंग, गन्तव्य, ध्वनि उत्पादन सामाग्री, विधिहरू गति र यति मा।
त्यहाँ लक्षण को विवरण छ, तर आफ्नो सूची समाधान गुप्तिकरण गरिएको छ जहाँ यो समूह, पहेली समावेश गर्न सक्नुहुन्छ। यी पहेलियों, एक सरल विश्लेषण गर्न पर्याप्त अनुमान गर्न भनेर छ, संश्लेषण सञ्चालन प्रदर्शन, विशेषताहरू पहिचान, र त्यसपछि एक एकाइ मा उनलाई संयोजन।
सामान्यतया जटिलता को पहिलो स्तर सम्बन्धी पहेली, प्रदान विषय संकेत को एक पर्याप्त संख्या - र तार्किक समस्या चाँडै र सजिलै हल छ।
दोस्रो स्तर पहेलियों। वस्तुहरु को गुण
यो समूह पहेली समावेश - एक वा दुई सुविधाहरू व्यक्त जो वस्तुहरु, को गुण वर्णन। विवरण को brevity बावजूद, बच्चा तपाईं पूर्ण छवि पुनर्स्थापना गर्न चाहन्छु।
यो समूह पनि तुलना, वस्तुहरू र घटना को तुलना मा आधारित छन् जो पहेली सामेल छन्। पाठ को स्वागत इन्कार गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यी पहेलियों अनुमान गर्न, बच्चा वस्तु वा घटना अनुमान को एक एकदम पूरा तस्वीर हुनुपर्छ। उहाँले मात्र होइन एक पहेली गुण आवंटित गर्न आवश्यक छ, तर पनि एउटै वस्तुको अन्य विशेषता सुविधाहरू, छैन सन्दर्भ पाठमा प्रतिनिधित्व तिनीहरूलाई तुलना गर्न।
तेस्रो स्तर को रहस्य। गुण, रूपको वर्णन
कठिनाई को तेस्रो स्तर सम्बन्धित पहेलियों अनुमान गर्न, बच्चाहरु सञ्चालन पहिलो नजर मा धेरै टाढा अलग हुन थाल्छ जो गुण र विशेषताहरु, तुलना गर्न आवश्यक छ। तर यो केवल सुरुमा देखा पर्न सक्छन्। यहाँ, बच्चा को रूपक को लुकेका अर्थ बुझ्न आवश्यक छ।
जो गुण वर्णन गर्ने पहेली को विकल्प, वस्तुहरु, कार्यहरू, घटनाहरु को सुविधाहरू धेरै कारक प्रभावित छन्। सबै को पहिलो, हामी छोराछोरीले बाँचिरहेको संसारको सीमित समझ छ कि सम्झना गर्नुपर्छ। यो आफ्नो बरु गरिब अनुभव कारण हो।
यो पहेली को विषय दैनिक जीवनमा बच्चा चारै ओर कि वस्तुहरु हुन सक्छ कि यस कारण लागि हो। तिनीहरूले आफ्नो बच्चा नजिक छन्, तिनलाई भावनात्मक प्रभाव छ। सबै भन्दा साधारण शब्दहरू otgadka-नाम खिलौने, पाल्तु जनावर, भोजन, सरसफाइ उत्पादन र वस्तुहरू छन्।
उमेर संग, विषय को दायरा विस्तार, त्यसैले प्रस्तावित पहेली को जटिलता को स्तर गर्छ। प्रकृति, खेल, पेशा को परिवहन घटना, बिरुवाहरु र जनावरहरूको दुनिया - बच्चाहरु संग प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने पहेली को सूची।
तपाईंको आफ्नै पहेली रचना
अनुमान प्रक्रिया धेरै मोहित छोराछोरीलाई छ। यो धेरै गाह्रो छ तापनि तर, के गर्न कुनै कम रोचक यसको रहस्य संग आ।
गुण को विवरण - काम बच्चाहरु को यस प्रकारको विकास को शुरुवात मा पहेली रचना गर्ने प्रस्ताव गर्नुपर्छ। उनि एक वयस्क देखाउँदछ मोडेल, मा कोरिएका हुन्छन्। यो सबै बच्चाहरु तुरुन्तै काम यस प्रकारको सामना गर्न सक्षम छन् कि कुनै गोप्य छ। तर नियमित व्यायाम कुनै पनि बच्चा यो कौशल विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
समय, छोराछोरी आफूलाई हुनेछ पहेलियों साथ आउन गुण मा, काम खुशी यस प्रकारको देखि प्राप्त, वस्तुहरू को विशेषताहरू।
पहेली रचना छोराछोरीको रचनात्मक काम को परिणाम आफ्नो पुस्तक वा एल्बम सजाया गर्न सकिन्छ। एल्बम गर्न पहेली पदहरू बाहेक तपाईं तिनीहरूलाई तस्वीर राख्न सक्नुहुन्छ।
एक रहस्य सामना गर्दा निरन्तर "साइन" र "सम्पत्ति" को मामला मा विचार छ। त्यसैले के गुणहरू चिन्ह फरक छ? - वस्तुको सामान्य विशेषताहरु चिन्ह: छोटकरीमा यसलाई निम्नानुसार यसो गर्न सकिन्छ। सम्पत्ति गुणस्तर विषयको एक विस्तृत विवरण प्रदान गर्दछ।
हाम्रो जीवन मा पहेली को कथा दुवै बच्चाहरु र वयस्क लागि रोचक हुन सक्छ।
कला यस प्रकारको गर्न विशेष सान्दर्भिकता पनि एक प्राचीन मानव थियो। यो धेरै कुल मा खण्डमा एक अनुष्ठान एक मानिस मा एक केटा अस्तित्व कि ज्ञात छ। जवान परिपक्वता को परीक्षण खडा सकेन गर्न, उहाँले आफ्नो चपलता, भौतिक बल र साहस प्रमाणित गर्न आवश्यक थियो। यो शिकार मा ferocious predator मार्न, साथै आफ्नो बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि देखाउन, दुखाइ सामना गर्न आवश्यक थियो।
जर्मन र युनानी को एक मार्शल आर्ट पहेलियों अनुमान थियो। काम सामना सक्ने छैन एक मानिस, आफ्नो जीवन गुमाउनु।
को Slavs त्यहाँ विश्वास छ कि पहेलियों अनुमान र यसको जवाफ सक्दैन मानिसहरूलाई नष्ट जस्तै मत्स्यांगना।
Guessing र अनुमान पहेलियों रूसी विवाह समारोह जरूरी थियो। को bridesmaids दूल्हा अप आउन थिए र आफ्नो मित्र धेरै गाह्रो कार्यहरू छन्। यदि जवानहरू पहेलियों, दुलही अनुमान र तिनीहरूले दिनुभएन सकेन। यस्तो समारोह आधुनिक विवाह मा देख्न सकिन्छ, तर अब त्यो एक हास्य वर्ण छ।
धेरै वर्ष देखिने अघि पहेली सधैं यसलाई, कल्पनाशीलता सोच्न असाधारण सावधान, व्यावहारिक ज्ञानयुक्त मन देखाउन आफ्नो क्षमता विकास गर्न, विश्व बारेमा ज्ञान को सामान भर्न सम्भव छ जो द्वारा हालतमा छन्।
किन विज्ञान प्राविधिक प्रगति को इन्जिन छ? विज्ञान र शिक्षा को सम्बन्ध
कति चाँडो शब्द "मिसिन" एउटा वाक्य बनाउन
विवादास्पद द्वीप। Tarabarova अब नक्सा, उहाँले अब Inlundao मा। द्वीप Tarabarov चीन दिइएको। रूसी-चिनियाँ सीमा को साँध सीमाङ्कन
केही दिनको लागि रोम मा के हेर्न?
एक निजी घरमा पानी आपूर्ति र सरसफाई सिद्धान्त
एक विशेष सेक्स को एक बच्चा गोदभराई - विधि र सम्भावनाहरू
मा Lloret de Mar (स्पेन) आकर्षण। को Lloret de Mar स्पेनको सहरमा के हेर्न?
कीमा बनाएको मासु स्वादिष्ट र स्वस्थ casserole (चिकन)